आज नै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत ल्याउलान् ? - Pnpkhabar.com
आज नै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत ल्याउलान् ?
काठमाडौं, ३ साउन : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार नै विश्वासको मत लिने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरेपछि पहिलो बैठक आइतबार अपरान्ह ४ बजे बस्दैछ । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार आइतबारको बैठक दुई चरणमा बस्नेछ ।
पहिलो चरणको कार्यसूची सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने गरी तयारी गरिएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा लिएर जाँदैछन् । बैठकले प्रस्तावलाई बैठकमा टेबुल गर्ने निर्णय गरे आइतबार नै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनेछन् ।
केही बेरमा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्दैछ । सर्वोच्चको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।